Yan Aung: မိမိကိုယ်ကို သစ္စာရှိခြင်း...
ဟိုတစ်လောက ကျွန်တော်နဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ချို့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကိစ္စလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်အားလုံးကို ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့တာ အသိပဲ ဖြစ်မှာပါ. ပြီးတော့ ကျွန်တော်တင်ထားခဲ့တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကိုလည်း ပြန်ဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်.
အမှန်တော့ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ အကုန်မမှန်သလို အကုန်လည်း မမှားခဲ့ပါဘူး. ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ နည်းနည်းဆန်သွားတဲ့ ချေပပြောဆိုချက်တွေမှာတော့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်း ရင့်သီးသွားတာတွေ ပါကောင်းပါနေနိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ့ကိစ္စဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းကတည်းက စာရေးနည်းနည်းကျဲသွားခဲ့တယ်. အလုပ်တွေများတာလည်း ပါပါတယ်. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း စာရေုးဖို့ မုဒ်ပျောက်နေတာလည်း ပါပါတယ်.
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ချို့ကတော့ အဲဒီ့ပို့စ်ကို ပြန်တင်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်. ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ. တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အတ္တတိုက်ပွဲမှာ ကိုယ့်ဖက်က မလျှော့ချင်ဘဲ လျှော့လိုက်ရရင် ရှေ့ဆက်လုပ်မယ့် ကိစ္စတွေမှာ အင်အားသိပ်မရှိတော့သလို ခံစားရတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်.
ကျွန်တော် အဲဒီ့ပို့စ်ကို ရေးတုန်းက အင်နဲ့အားနဲ့ မခံချင်စိတ်နဲ့ ရေးခဲ့တာပါ.
အဲဒီ့ပို့စ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော့်မှာ ရင်တွင်းဖြစ်ခံစားချက်တွေ လျော့ကျသွားသလို စာရေးရတာလည်း စိတ်သိပ်မပါတော့သလို ခံစားလာရတယ်.
ဒီမနက် ကိုရန်သူ ဆိုတဲ့ စာဖတ်သူတစ်ယောက်က ကော်မန့်ရေးသွားပါတယ်.
ကျွန်တော်ဘလော့ဂါတယောက်မဟုတ်တဲ့ စာဖတ်သူသက်သက်တဦးပါ။ ကိုရန်အောင်နဲ့အခြားဘလော့ဂါတဦး ဆွေးနွေးစရာ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့စာကို ဖတ်ရတယ်။ ကိုရန်အောင့်စာကိုရော အခြားဘလော့ဂါရဲ့စာကိုရောပေါ့။ နောက်ကိုရန်အောင်က စာတစောင်ပြန်ရေးတယ်။ ပထမဆုံးကိုရန်အောင်ရေးခဲ့တဲ့စာကို ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဒီတင်ပြီးပြီထင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်ကိုရန်အောင်က ဒီစာကိုထပ်ရေးခဲ့တယ်။ ဆက်ရန်ရှိသေးသည်ပေါ့....
ကျွန်တော်အရင်ဆုံး အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ကိုရန်အောင်တင်ထားပြီး ပြန်ဖြုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ပထမပို့စ်ကို ပြန်တင်ထားပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကိုရန်အောင်ဒေါသဖြစ်လို့ရေးမိတာကလွဲပြီး စာပါ ယုံကြည်ချက်တွေက မှန်ကန်နေဆဲပဲလို့ ဒီစာအရသိရလို့ပါ။နို့မဟုတ်ရင် ကိုရန်အောင်ဘာတွေကို ယုံကြည်ခဲ့တယ် ဘာတွေကိုမယုံကြည်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ပထမပို့စ်ကိုမဖတ်မိလိုက်သူတွေ ဆက်စပ်ရခက်သွားနိုင်မယ်ထင်လို့ပါဗျာ။
ကျွန်တော်မှားခဲ့တာ ရှိမယ်. မှန်ခဲ့တာတွေလည်း ရှိမယ်.
ဒါပေမယ့် စာဖတ်ပရိသတ်ကို သစ္စာရှိသောအားဖြင့် ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီးတဲ့ ပို့စ်ကို မဖြုတ်သင့်ဘူး. ဒီကိစ္စကို ထောင့်ပေါင်းစုံက မြင်တဲ့သူတွေ ရှိနိုင်တယ်. ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်တင်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်.
ရှေ့လျှောက် ကျွန်တော်လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဘယ်လောက်ပဲ အခက်အခဲ ဆန့်ကျင်မှုတွေ ရှိနေပါစေ. ကျွန်တော်ယုံကြည်စွာ၊ မည်သူ့ကိုမျှ မထိခိုက်ဘဲ ပြတ်သားစွာ လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်.
စဉ်ဆက်မပြတ် အားပေးဖတ်ရှုနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေ စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ်အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကျွန်တော် ကိုယ့်စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ပြန်ထိန်းနေခဲ့တယ်. ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့သိမှာပါ…
ကျွန်တော့်ကို ဒီလောက်ထိ ပြောဖို့ သူတုိ့တွေမှာ အင်အားရှိနေပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ခွန်းတုံ့မပြန်လိုပါဘူး.
ဒါဟာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျွန်တော်လေးစားတယ်. သူတို့ကို ကျွန်တော် မပုတ်ချလိုဘူး. ကျွန်တော့်မှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့ Life Philosophy ရှိတယ်.
ရန်အောင်ဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးပေး လက်မြှောက်တတ်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး
ရန်အောင်ဆိုတာ ခြောက်တိုင်းကြောက်တတ်တဲ့ လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူး
ခင်ဗျားတို့ ပြောထွက်ရက်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ပြောမထွက်ဘူး….
ဒီလိုပြောလိုက်ရလို့ ခင်ဗျားတို့ ကျေနပ်လား. အားရသွားလား. Ego တစ်ခု ပြည့်ဝသွားလား.
အိုကေ. That’s fine. If you think it’s good for whoever concerned, go for it!
ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူထားတာ တစ်ခုရှိတယ်.
ကျွန်တော်ဟာ နောက်လိုက်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်သလို ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်သူလည်း ဖြစ်တယ်.
ကျွန်တော့်ကို မလိုလားသူတွေရဲ့ မျက်နှာတွေထက် မြန်မာပြည်တွင်းမှာ၊ မြန်မာပြည်ပြင်ပမှာ ရှိနေတဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ကျွန်တော်ကြည့်တယ်.
ကျွန်တော် ဒီဘလော့ဂ်ကို ရေးတာဟာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ခံစားချက်အတ္တတွေ ပြည့်ဝဖို့ထက် အများစုရဲ့ အခက်အခဲကို ကြိုးစားဖြေရှင်းပေးဖို့ ရေးနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပို့စ်တွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်.
ရန်အောင်ဆိုတာ ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှ မထောက်ဘဲ ရသမျှအခွင့်အရေးကို မျှော်ကိုးပြီး လက်တစ်လုံးခြား လိမ်လည်လှည့်ဖျားတတ်တဲ့သူ…
ဒါတွေကိုကြားရလို့ ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းတယ်. စိတ်ပျက်တယ်.
ဒါပေမယ့် အားမငယ်ဘူး. စိတ်ဓာတ်မကျဘူး…
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘ၀မာန်မှာ ဘယ်သူမှ ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလို့ မရတဲ့၊ တွန်းလှန်ပယ်ဖျက်လို့ မရတဲ့ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်မှု တစ်ခုရှိတယ်.
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အကြိမ်ကြိမ် ကျရှုံးခဲ့ဖူးတယ်.
ကျရှုံးတိုင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်.
ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ကျွန်တော့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် လိပ်ပြာသန့်စွာ ဂုဏ်ယူတယ်.
ဘလော့ဂ်ရေးဖို့ ကိစ္စလေးတစ်ခုလောက်နဲ့၊ အခွင့်အရေးလေး တစ်ခုရဖို့အတွက်နဲ့ ရန်အောင်ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂါမွေးဖွားလာခဲ့တယ်လို့ ထင်ရင် ခင်ဗျားတို့ သိပ်မှားသွားမယ်.
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ တစ်ခုချင်းကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းနေဖို့ စိတ်မ၀င်စားဘူး.
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စကားလုံးတွေကို စွပ်စွဲချက်တွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်နေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ အကျိုးရှိတဲ့ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များစွာ ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်.
ခင်ဗျားတို့ဆီက အထင်ကြီးမှု၊ လေးစားမှုတွေကို မျှော်ကိုးပြီးတော့လည်း ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်ရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး.
ခင်ဗျားတို့ ဆုတောင်းပေးနေရုံနဲ့လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘ၀ဟာ အလိုလို အောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ဘူး…
စေတနာမပါတဲ့ ဆုတောင်းတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို လာပြီး မလှည့်စားပါနဲ့.
မေတ္တာမပါတဲ့ ခပ်ထေ့ထေ့ အပြုံးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို လာပြီး သနားယောင်မပြပါနဲ့.
အိုးမလုံအုံပွင့်ပြီး ကိုယ်လုပ်ထားတာကို မလုပ်သယောင် နာမည်ပြန်ပြီး လာမယူပါနဲ့.
ဒီနေ့ခေတ်ဟာ IT ခေတ်ပါ.
ကလောင်လက်နက်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်တာဟာလည်း တော်လှန်ရေးတစ်ခုပါပဲ.
ဒါကို မယုံကြည်ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားမှာ အသိအမြင်ဘယ်လောက်ခေါင်းပါးလဲ ဆိုတာ ပြသနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ.
DVB သွားတော့. ခေတ်ပြိုင်လည်း နားတော့. VOA လည်း ဂျောင်းတော့.
လက်နက်ကိုင်တိုက်တိုင်း တော်လှန်ရေး အောင်မြင်မယ်ဆိုရင် စက်တင်ဘာအရေးအခင်းတုန်းက တောတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ဘာလုပ်နေကြလဲ.
ခေါင်းဆောင်တွေ စည်းလုံးစွာ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါတော့လား
နအဖအခက်၊ တို့တွေအချက်ဆိုပြီး ထချကြပါတော့လား
ပြည်တွင်းမှာ နအဖက စိန်ပြေနပြေနဲ့ သတ်နေတာကိုပဲ ဒေါပွလိုက်၊ ၀ူးဝါးဝူးဝါး ကြေငြာချက်တွေ ထထုတ်လိုက်၊ အပုတ်ချ ရှုတ်ချလိုက်နဲ့ပဲ လုပ်နေခဲ့ကြတယ်.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ဖူးတိုင်း တော်လှန်ရေး လုပ်နေတဲ့ အပြင်းစား တော်လှန်ရေးသမား (Democracy Hardcore) တွေလို့ ယူဆရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ယုံကြည်ချက်ကို ကျွန်တော် အော့နှလုံးနာတယ်.
တစ်တိုင်းပြည်လုံး လက်နက်ကိုင် တိုက်ကြပေတော့.
အသိအမြင်ရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေကို နောက်ချန်ထားခဲ့တော့
ဒီမိုကရေစီ၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုပြီး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ အာဏာရှင်ဆန်နေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ မသိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ညာနေကြတယ်.
နအဖ ဘာမှ မလုပ်ရဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေ သွေးကွဲတယ်.
ရန်အောင် ဘာတွေလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို အလုပ်နဲ့ပဲ သက်သေပြမယ်.
ခင်ဗျားတို့ သိနေဖို့ မလိုဘူး
ရှေ့လျှောက် နည်းပညာပို့စ်တွေ များများဆက်ရေးမယ်.
ကော်မန့်တွေ၊ အမြင်တွေလည်း မလိုချင်တော့ဘူး…
သိချင်ရင် အီးမေးလ်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ.
အသားအရောင်၊ ယုံကြည်ချက်၊ လူမျိုးမခွဲခြားဘူး..
တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ရန်အောင်ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂါ ဆက်ရှိနေမယ်…
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်တာဝန်တွေ ပြီးဆုံးတဲ့အထိ ဘာကိုမှ မကြောက်ဘဲ၊ နောက်မတွန့်ဘဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်သွားမယ်.
ဒါတွေအတွက် တစ်နေ့ လာမချီးမွမ်းပါနဲ့.
တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ မျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေကိုလည်း တွေ့လိမ့်မယ်.
သူတို့လုပ်နေတာတွေကို ရန်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် သူတို့နဲ့ယှဉ်ပြီး ရန်အောင့်ကို ပုတ်ခတ်ပါ. မကောင်းကြောင်းတွေ ဖြန့်ဝေပေးပါ.
သူတို့မလုပ်နိုင်တာတွေကို ရန်အောင်လုပ်နေတယ် ဆိုတာကိုလည်း မကြည်ဖြူရင်တောင်၊ အသိအမှတ်မပြုနိုင်ရင်တောင် ခင်ဗျားတို့ စိတ်ထဲမှာ သိမ်းထားပေးပါ.
ကျွန်တော့်ကို မုန်းတီးသူတွေ ရှိသလို ချစ်ခင်သူတွေလည်းရှိတယ်.
လူဆိုတာ အသက်ကြီးတိုင်း ရင့်ကျက်ပြည့်ဝလာတတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး...
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်စိတ်ကို သတိထားကြိုးစာပြုပြင်မှ တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြည့်ဝတဲ့ စိတ်ထားတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်တာပါ.
ဒါဆိုရင် သက်ဆိုင်သူတွေ သဘောပေါက်. သူများမကောင်းကြောင်းပြောပြီး ကိုယ့်သိက္ခာကို မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဆိုရင်တော့လည်း ဆက်လုပ်ပါ. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့မှာ တစ်ခြားအဖိုးတန်တဲ့ လုပ်စရာတွေ မရှိလို့နေမှာပေါ့.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ပညာအလင်းရောင်ကို ဆက်လက်ထွန်းညှိသွားမယ်…
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပညာအရည်အချင်းကိုလည်း ဆက်လက်မြှင့်တင်သွားမယ်.
ရန်အောင် ဘာကောင်လဲဆိုတာ တစ်နေ့ ခင်ဗျားတို့ ကောင်းကောင်းကြီးသိလာမှာပါ.
လက်နက်ကိုင်တိုက်လို့ လွတ်လပ်ရေး ရကောင်းရနိုင်မယ်. အကြွင်းမဲ့ နိုင်ငံရေးလို့တော့ မယူဆနဲ့. လုံးဝမဟုတ်ဘူး.
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တိုးတက်ထွန်းကားဖို့ အသိအမြင်ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝတဲ့ ပညာရှင်တွေ အများကြီးလိုတယ်.
ကလောင်စွမ်းထက်တဲ့ မျိုးချစ်နိုင်ငံသားတွေ၊ စာပေပညာရှင်တွေ အများကြီးလိုတယ်.
နိုင်ငံတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း အစီအစဉ်တွေဆွဲဖို့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ AK-47 ကြီးကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး ဆွေးနွေးကြ၊ ငြင်းခုန်ကြ.
တိုင်းပြည်တစ်ခုစည်ပင်သာယာဖို့ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိတယ်.
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ လုပ်နိုင်တဲ့၊ ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာတွေ ရှိတယ်.
အဲလိုပဲ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မတတ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းတွေ၊ ချို့ယွင်းချက်တွေလည်း အများကြီးရှိတယ်.
ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ့်သူဆိုတာ အရာရာကို သိမြင်တွက်ဆနားလည်ပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်သင့်တာ၊ လုပ်နိုင်တာနဲ့ တာဝန်ခွဲဝေပေးသင့်တာတွေကို ဆုံးဖြတ်ရတယ်.
သေနတ်တကားကားနဲ့ ဒီမိုကရေစီအကြောင်း ခင်ဗျားလာမပြောနဲ့.
ကျုပ်ကတော့ ရှင်းတယ်. ကျုပ်နားလည်တဲ့ အချက် ကျုပ်မှာရှိတယ်.
ကျုပ်ဟာ တိုက်ခိုက်ရေးသမားမဟုတ်ဘူး. ကျုပ်ဟာ Strategist တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်. Sector ပေါင်းစုံကို စုစည်းနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်သူဖြစ်တယ်. အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်လိုင်းကို ရွေးချယ်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်.
ကျုပ်ကို အခွင့်အရေးသမားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ငကြောက်ကြီးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်သလိုခေါ်.
ကျုပ်တတ်နိုင်တာနဲ့ မတတ်နိုင်တာကို ပီပြင်ပြတ်သားစွာ ရွေးချယ်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်.
အေး. ခင်ဗျားတို့ လုပ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းကိုလည်း ပီပြင်အောင်လုပ်.
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေချိန်မှာ နအဖက စနစ်တကျနဲ့ အင်အားတွေ တိုးချဲ့တည်ဆောက်နေတယ် ဆိုတာကိုလည်း မမေ့နဲ့…
ကျုပ်သာ အခွင့်အရေးသမားဆိုရင် ကျုပ်ရဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ အချိန်တွေကို ဒီအွန်လိုင်းလောကအတွက် ဖဲ့ပေးမနေဘူး.
အဲဒါ ခင်ဗျားတုိ့ စိတ်ထဲမြဲမြဲမှတ်ထားပါ.
သူများကိုလက်ညှိုးထိုး ပြောဆိုနေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လက်ငါးချောင်းမှာ လက်ညှိုးကလွဲလို့ ကျန်တဲ့လက်လေးချောင်းလုံး ဘယ်သူ့ကို ပြန်ထိုးနေလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိပါ.
အလကားနေရင်း သူများအတင်းတွေ၊ အဖျင်းတွေ ထိုင်တုပ်မနေနဲ့.
ခုလိုပြန်တင်ပေးတော့ လေးမ လွတ်သွားတာလေး ဖတ်ရတာပေါ့...။ ဘာတွေ ညာတွေတော့ လေးမ မသိပါဘူး...။ ဒီဘလော့ဂ်က လေးမ အတွက် ပညာရတယ်ဆိုတာတော့ သိတယ်...။ ကိုရန်အောင် သိတဲ့ ပညာတွေ..အတွေးတွေ ဆက်မျှပါဦး...။
ထပ်ပြောပြန်ရင်ထပ်ဖွတာဖြစ်နေအုံးမယ်။ ဘယ်သူတွေဘာတွေပြောပြော သမိုင်းက အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။ အချိန်အတိုင်းအတာ တခုထိတောင့်ပြီးတော့ရင် အဖြေကထွက်လာမှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလို့ ပြောနေသူတွေမှာလည်း သူတို့ရဲ့ခံယူချက်အမြင်တွေကို နားလည်းပေးလို့ရပါတယ်။ တခုဘဲရှိတာက ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာ စေတနာထားတတ်ဖို့ဘဲလိုတာပါ။ ကိုယ်ကြည့်ရမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်နှာတခုပါ။ ဘယ်သူမျက်နှာ မှမဟုတ်ဘူးလေ။ လက်ကိုင်ကိုင်တော်လှန်တော်လှန်ရေး နဲ့ လက်နက်ကိုင်ခုခံကာကွယ်ရေး ဆိုတဲ့ ဝေါဟာ ၂ခုမှာ ကိုယ် ဘာကို လက်နက်ကိုင်ပြီး လုပ်နေတယ်ဆိုတာကအဖြေပေါ်မှာပါ။ အားလုံးသော ညီအကိုတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် စေတနာထားတယ်၊ ပေးဆပ်ချင်တယ်ဆိုတယ် ဘယ်နေရာကမဆို လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ တော် ထဲ၊ တောင်ထဲမှာ လက်နက်ကိုင်ပြီး လုပ်မှ နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့သူ၊ ပေးဆပ်နေသူ၊ တော်လှန်ရေးသမားပီသ သူလို့ ခံယူရင် ဝါးလုံးခေါင်းထဲမှာ လသာ နေသူဘဲဖြစ်မှာပါ။ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်မှန်တယ် မမှန်ဘူးမပြောပါဘူး၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်ခရီးပေါက်ခဲ့သလဲ။ ဘယ်လောက်ထိ အောင်မြင်ခဲ့သလဲ၊ ကျဆုံးခဲ့သလဲ စတာတွေဟာ မှန်ကန်တဲ့ လျှောက်လှမ်းမှု၊ မှားယွင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေအတွက် လတ်တလောအခြေခံဘဲ။ ကျွန်တော်ကို တော်ထဲလာပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလာလုပ်ပါလား မေးရင်တော့၊ မလုပ်နိုင်ဘူးဘဲဖြေမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒီလို တောထဲမှာ လက်နက်ကိုင်ပြီးလုပ်လို့ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်လာမယ် မထင်လို့ပါ။၊ လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ တောထဲတောင်ထဲမှာ ဘာမှမလုပ်ရဘဲ၊ အောက်ခြေအဆင့် ကလူတွေနဲ့ ပစ်ဟယ် ခတ်ဟယ်၊ ကိုယ့် အချင်းချင်းထဲမှာ ကိုယ်ထက်သာမယ်၊ ကျော်မယ်ထင်ရင် သူလျိူဆိုပြီးစွတ်စွဲပြီး တောထဲတောင်ထဲ မှာ အသတ်ခံရမဲ့ နေရာမျိုးမှာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ အသေမခံနိုင်လို့ဘဲ။ သေရဲတယ်၊ တိုက်ရဲတယ်၊ သတ်ရဲတယ် ဆိုရင် မြို့ ပေါ်တတ်ပြီးတော့၊ လုပ်ပါလား။ သူ့မှာလည်းလက်နက်၊ ကိုယ့်မှာလည်းလက်နက်ဘဲဟာ၊ ဘာလို့ တော်ထဲမှာ ခိုနေရမှာလဲ။ ကျားသူပုန် တွေ၊ သိရီလကာင်္ခွဲထွက်ရေးသမားတွေလို့၊ အီရတ်မှာ အသေခံ ဗုံးခွဲနေသူတွေလိုလုပ်ပါလား။ အသေခံရဲရင်ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်တော့ မလုပ်နိုင်ဘူး၊ သူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူး၊ ပြောချင်တာက ဘာမှမလုပ်ဘဲ၊ အသေခံ၊ အသတ်ခံတာထက် ဆာရင်တော့ အပေါ်ကလို လုပ်ပြီးမှ အသေခံမယ်လို့ပြောတာပါ။ တော်လှန်းရေးတိုင်းမှာ ပေးဆပ်မှုတွေ ရှိတာ လက်ခံပါတယ်။ အဓိက ပြောချင်တာက ကိုယ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အကျိုးရှိမှု၊ မှန်ကန်မှုပေါ်မှုတည်စေချင်တာပါ။ ကျားသူပုန် တွေ၊ သိရီလကာင်္ခွဲထွက်ရေးသမားတွေလို့၊ အီရတ်မှာ အသေခံ ဗုံးခွဲနေသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ် မှန်လား၊ မှားလား ဆိုတာထက် သူတို့လုပ်လိုက်တဲ့ အကျိုးတခုဟာ အတိုင်းအတာ တခုသက်ရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံရမှာပါ။ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ရင်တော့ ဒီအကျိုးရဲ့ ရလဒ့်ခံစားရမှာပါ။ သူတို့လုပ်လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေတယ်၊ဒဏ်ရာရတယ် ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ် အသေခံပြီးလုပ်မဲ့သူတွေ တန်းဆီးနေတာကိုသိရင် သူတို့လုပ်တာ တန်းဆီးနေသူတွေ ထောက်ခံလိုဘဲဆိုတာသိမှာပါ။ ဒီအတိုင်းလည်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ နှိပ်စက်ခံ၊ အကျဉ်းကျခံပြီးသေနေကျတာဘဲ ဆိုပြီးခံယူလို့ဘဲ။ ကိုယ်တွေဒီလိုသာခံယူပြီး ပြည်တွင်း နအဖ အရာရှ်ိတွေ၊ ထောက်ပံနေသူတွေ၊ မိသားစု တွေကို ဒါမျိုးသာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကော၊ တော်လှန်ရေးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလား၊ ဘယ်နှစ်ယောက်ထိ အသေခံပြီးလုပ်စရာလိုမယ်ထင်လဲ၊ ဒီလို လုပ်လုပ်လို့ တောထဲမှာ တော်လှန်ရေးလုပ်တာလောက် လုပ် မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလား၊ တော်ထဲမှာ အသေခံပြီးပေဆပ်မှ တော်လှန်ရေးလား၊ တော်ထဲမှာနေပြီး၊ တော်လှန်ရေးသမားလို့ ဘဲ ခံယူမှ အောင်မြင်မှာလား။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ဘယ်နေရာမှာဘဲ နိုင်ငံအတွက်လုပ်လုပ် ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရဲ့ အများအတွက် လည်းအကျိုးရှိမယ်၊ ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးမယုတ်ရင် ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အပိုင်းက လုပ်လုပ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ တော်လှန်ရေးမှာ မပါဝင်နိုင်ကြပေမဲ့၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်နိုင်ရင်လည်း အကျိုးရှိပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် ဟိုဟာ ဒီဟာ ပြောနေကြမယ့်အစား ကိုယ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေထွက်လာအောင်လုပ်ကြဖိုသာ အဓိကပါ။
အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ရှင်သန်မလား၊ တန်ဖိုးရှိရှိအသေခံမလား ဆိုတဲ့ စကားကိုနားလည်ရင် .....
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တော့ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာမတူညီတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ စစ်အဆိုးရကိုတော်လှန်နေကြတာချင်းတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်